Inka Badan 1,800 Ka Tirsan Ciidamada Burundi oo isaga baxay gayiga Soomaaliyeed | Voice Of Somalia
Inka Badan 1,800 Ka Tirsan Ciidamada Burundi oo isaga baxay gayiga Soomaaliyeed
Posted on June 2, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Munaasabad ka dhacday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho oo ay kasoo qeyb galeen saraakiil katirsan ciidamada AMISOM ayaa lagu sagootiyay kumanaan askari oo muddo sanada ah soomaaliya kula dagaalamayay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Taliyaha ciidanka Burundi ee Soomaaliya ku sugan ayaa sheegay in 1,828 askari ay ka qaadeen soomaaliya islamarkaana ay ka qeyb qaadan doonaan sugidda ammaanka Burundi.
“Maanta waxaan sagootinaynaa kumanaan katirsan ciidanka Burundi oo runtii howlgal fiican ka qabtay soomaaliya,dalkooda ayay dib ugu laabanayaan halkaasi oo ay ammaanka wax ka sugi doona”anayuu yiri Ergaga midowga Afrika uqaabilsan soomaaliya.
Soomaaliya waxaa duullaan gardarra ah kusoo qaaday kumanaan ciidamo Afrikaan calooshood u shaqeystayaal ah kuwaasi oo lacago ka qaata reer galbeedka taasi bedelkeedna la dagaalama muslimiinta Soomaaliya.
Dagaal Beeleed Dhiig Badan Ku Daatay Oo Ka Dhacay Duleedka Balcad.